WhatsApp dia nohavaozina ary ankehitriny mamela anao handefa sary mivantana ho toy ny horonan-tsary | Vaovao IPhone
vaovao Fanavaozana ny WhatsApp ary, toy ny mahazatra, ao amin'ny lisitry ny fisehoan-javatra vaovao dia lazain'izy ireo momba ny fiasa sasany efa azonay tamin'ny kinova taloha, toy ny mety hisian'ny mandefa ary mandray GIF. Mazava ho azy, raha afaka mandefa azy ireo isika dia mbola mila manao izany hatrany amin'ny volantsika, satria ny asan'ny fikarohana amin'ny serivisy toa an'i Giphy na Tenor dia ampandehanana miandalana ary efa afaka manao izany ny firenena toa an'i Alemana.
Zava-baovao iray hafa mahaliana koa ny fahafahantsika manao mandefa izay horonan-tsary 6 segondra na latsaka ny halavany ho GIF, zavatra azontsika atao amin'ny fisafidianana ny safidy "GIF" aorian'ny fisafidianana horonan-tsary. Ary farany, farafaharatsiny, amin'izay azontsika vakiana amin'ny famaritana izay nampidirin'izy ireo tao amin'ny App Store, afaka mandefa sary mivantana ho toy ny GIF mihetsika ihany koa isika, ka tsy maintsy misafidy "sary mivantana" miaraka amin'ny fihetsika 3D Touch ary avy eo mikasika ao amin'ny "Select as GIF".
Ny fanavaozana WhatsApp vaovao dia mifantoka amin'ny GIF
Ny fijerena ireo vaovao mety ampidirin'ity fanavaozana ity, ny zavatra voalohany azontsika atao dia ny menio fizarana vaovao izay miseho rehefa mikasika ilay marika "+" ianao. Araka ny hitanao amin'ity sary manaraka ity dia misy kisary miseho eo akaikin'ny tsirairay amin'ireo safidy, zavatra izay, raha tsy diso aho, dia tsy nisy tamin'ny kinova teo aloha.
Ny tena mazava dia tsy izay rehetra nantenaintsika taminy ity fanavaozana ity, na tsy amin'izao fotoana izao. WhatsApp 2.16.15 dia efa mifanentana tanteraka amin'ireo antso an-tsary ary miaraka amin'ny fahaizana mitady GIF, fa ireo roa tonta ireo mbola tsy maintsy hampavitrika lavitra izy ireo. Raha heverintsika fa efa maro ny firenena izay afaka tadiavina ny GIF, farafaharatsiny io safidy io dia tokony hisy eto amin'ny firenentsika amin'ny herinandro izay hidirantsika. Ny antso an-tsary dia lohahevitra iray hafa, ary matahotra mafy aho fa amin'ity dia tsy maintsy hanana faharetana bebe kokoa isika, na dia te-ho diso aza aho.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » WhatsApp dia nohavaozina ary ankehitriny mamela anao handefa sary mivantana ho toy ny horonan-tsary